Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Airbus sy TNO hampivelatra ny terminal fifanakalozana laser
Airbus sy TNO hampivelatra ny terminal fifanakalozana laser
Ity tetik'asa ity dia ao anatin'ny fandaharanasan'ny European Space Agency (ESA) ScyLight (Secure and Laser fifandraisana teknolojia)
Ny teknolojia fifampiresahana laser no revolisiona manaraka amin'ny fifandraisana satelita
Ny tetikasa dia mandrakotra ny famolavolana, ny fananganana ary ny fanandramana ilay mpampita teknolojia
Ny terminal UltraAir dia afaka mifandray amin'ny laser eo anelanelan'ny fiaramanidina sy ny satelita iray amin'ny orbit geostationary 36,000 km ambonin'ny tany
Airbus sy ny Fikambanana Netherlands momba ny fikarohana siantifika ampiharina (TNO) dia nandefa programa hamolavola demonstrator terminal terminal fifandraisana amin'ny fiaramanidina, fantatra amin'ny anarana hoe UltraAir.
Ny tetikasa, izay iaraham-bola miaraka amin'i Airbus, TNO sy ny Netherlands Space Office (NSO), dia ao anatin'ny fandaharanasan'ny European Space Agency (ESA) ScyLight (Secure and Laser fifandraisana). Manarona ny famolavolana, ny fananganana ary ny fanandramana ilay mpampita teknolojia. Ny teknolojia fifampiresahana laser no revolisiona manaraka amin'ny fifandraisana satelita (satcom), mitondra taham-pandefasana tsy manam-paharoa, fiarovana ny angon-drakitra ary faharetana hihaona amin'ny filan'ny varotra ao anatin'ny folo taona manaraka.
Ny terminal UltraAir dia afaka mampifandray amin'ny laser eo anelanelan'ny fiaramanidina sy ny satelita iray amin'ny orbit geostationary 36,000 km ambonin'ny tany, miaraka amin'ny haitao tsy manam-paharoa ao anatin'izany ny rafitra mechatronic optika miorina tsara sy marina. Hanome làlana ho an'ny vokatra UltraAir amin'ny ho avy ny mpanentana teknolojia izay mety hahatratra gigabits isan-tsegondra ny tahan'ny fandefasana angon-drakitra raha manome anti-jamming ary ambany ny mety hisakanana. Amin'izany fomba izany ny UltraAir dia tsy ahafahan'ny fiaramanidina miaramila sy UAV (Unmanned Aerial Vehicles) mifandray ao anaty rahona ady, fa mamela ihany koa ireo mpandeha fiaramanidina hametraka fifandraisana haingam-pandeha haingam-pandeha noho ny antokon-kintana Airbus 'SpaceDataHighway. Avy amin'ny toerana misy azy ireo amin'ny orbit geostationary, ny satelita SpaceDataHighway (EDRS) dia mampita ny angon-drakitra voaangona tamin'ny zanabolana mpandinika an-tany amin'ny fotoana tena izy, dingana iray izay mety maharitra ora maromaro.
Airbus no mitarika ny tetikasa ary mitondra ny fahaizany manokana amin'ny serasera satelita laser, novolavolaina niaraka tamin'ny programa SpaceDataHighway. Handrindra ny fivoaran'ny terminal sy ny fanandramana amin'ny tany sy amin'ny rivotra. Amin'ny maha mpiara-miasa lehibe azy amin'ny tetikasa, ny TNO dia manome ny traikefany amin'ny opto-mechatronics avo lenta, tohanan'ny indostrian'ny teknolojia avo lenta sy ny habakabaka holandey. Ny Airbus Defense and Space any Netherlands dia tompon'andraikitra amin'ny famokarana indostrialy ny terminal. Tesat, zanaky ny Airbus, dia mitondra ny fahaizany ara-teknika amin'ny rafitra fifandraisana laser ary handray anjara amin'ny hetsika fitsapana rehetra.
Ny fitsapana voalohany dia hatao amin'ny faran'ny 2021 amin'ny toe-piainan'ny laboratoara ao Tesat. Amin'ny dingana faharoa, ny fitsapana an-tany dia hanomboka amin'ny 2022 mialoha any Tenerife (Espana), izay hametrahana ny fifandraisana eo anelanelan'ny demonstratera UltraAir sy ny terminal laser miantona amin'ny satelita Alphasat amin'ny alàlan'ny Station Optical Ground ESA. Ho an'ny fanamarinana farany, ny demonstratera UltraAir dia hampidirina anaty fiaramanidina hanaovana fitsapana sidina amin'ny tapaky ny 2022.
Rehefa mihalehibe ny fangatahana zanabolana, miaina bottlenecks ny onjam-peo nentim-paharazana satcom radio. Ny rohy laser dia manana tombony ihany koa amin'ny fisorohana ny fanelingelenana sy ny fikarohana, satria raha ampitahaina amin'ireo fahita onjam-peo efa feno olona dia sarotra ny sakanana ny fifandraisana amin'ny laser noho ny andry tery kokoa. Noho izany, ny terminal laser dia mety ho maivana kokoa, handany herinaratra kely kokoa ary hanome fiarovana azo antoka kokoa noho ny radio.
Ity programa vaovao ity dia dingana lehibe iray amin'ny sori-dalan'ny paikadin'i Airbus ankapobeny hanosehana ny fifandraisana amin'ny laser lavitra kokoa, izay hitondra ny tombon-tsoa azo avy amin'ity haitao ity ho fanavakavahana lehibe amin'ny fanomezana fiaraha-miasa Multi-Domain ho an'ny mpanjifan'ny governemanta sy ny fiarovana.